China Belgium square table(Stone glass) Manufacture and Factory |Tailong
Yonwabela ipatio yakho okanye ixesha lokuphumla ngasemva kwendlu kunye neseti yefenitshala eyomeleleyo neyomeleleyo yaseBelgium.Yenziwe ngesakhelo se-aluminiyam kunye nomphezulu weglasi eqhutyelwe ngamatye kunye neminqwazi yeenyawo zeplastiki ezimnyama ezingaphawuliyo.Izihlalo zesitulo saseBelgium ezilukwe ngentambo eyomelelayo, zisebenzisa uyilo olunomoya kunye nokunyamezela izinto ezikhathalelwa lula kunye nokubethwa ngumoya.Nokuba uphumile ukonwabela ukukhanya kwelanga okanye utyela phantsi kweenkwenkwezi, nethemba lokuba le seti yokutyela yaseBelgium iya kuba ilungele umsitho wakho olandelayo ongasemva kwendlu.
Belgium square table (iglasi yeglasi)
COCILE ILINES-IXESHA INDLELA
Itheyibhile yokutya yaseBelgium idibanisa itafile yeglasi ephuhliswe ngamatye kunye nesimo esithambileyo kwisakhelo se-aluminium.Oku kunika isitayile esitsha ngokupheleleyo seetafile zangaphandle kwi-assortment yethu.
IGQIBELELE UKUPHILA NGAPHANDLE
Iifreyimu ze-aluminiyam aziyi kugqwala, zibole okanye ziqhekeke, umphezulu wetafile yeglasi evuthululwe ngamatye unikezela ukugcinwa lula kunye nokumelana okuphezulu kwamabala, okwenza ukuba ilungele ukuhlala ngaphandle.
UYILO LOMLENZE OLUYI-ARC OLUYI-ARC
Itafile yokutyela yaseBelgium iyila umphezulu wetafile kunye nemilenze ibe yindawo egobileyo egobileyo, eyenza indawo ibe khaphukhaphu, idlulise intsingiselo elula nethambileyo, kwaye ichaza ubuhle bendawo.
* Ubume beNdibano
* 6mm iglasi epholileyo yelitye yangaphandle
Itafile yaseBelgium yesikwere
Nikeza iwaranti yeminyaka eyi-2-3.
Isiboniso seTafile yokutyela yaseBelgium
Isitulo sentambo kaMinnie
Ngaphambili: Itafile yaseBelgium yoxande (iglasi yelitye)
Okulandelayo: Isitulo sebha ye-Linz
Da Vinci aluminiyam itheyibhile uxande
Itafile ye-aluminiyam yaseDa Vinci